Kala Dahal's Page - MeroReport
Kala Dahal's Apps
Kala Dahal's Likes
Kala Dahal's Friends
Kala Dahal has not received any gifts yet
Kala Dahal's Page
Its me kala dahal, working asaprogram producer of the popular youth radio program Saathi Sanga Man ka Kura..
Kala Dahal's Blog
कथा 'म' पात्रको
Posted on February 27, 2013 at 11:00am2Comments2Likes
मेरो कथा, साँच्चै अनौठो लाग्छ, आफैलाई फर्केर हेर्दा । कस्ती म, कस्ती भएँ । के सोचेको थिएँ के भएँ । मेरो जिवनमा त्यती धेरै उथलपुथल होला भन्ने कहिलै सोचेकी थिइन । सबै जनासँग हास्ने, बोल्ने, रमाइलो गर्ने म, त्यो एक घटनाले मेरो त्यो चञ्चलतामा ग्रहण लाग्यो तर पनि बाँच्न र लड्न छोडिन मैले ।
मेरो उसँग प्रेम सम्बन्ध थियो, हामी एक अर्कालाई एकदमै माया गथ्र्यौ, हामी बीचको नाता यति प्रगाढ थियो की हामीले एक अर्का मै आफुलाई पूर्ण रुपमा समर्पण गरिसकेका थियौँ । हुन त उ अलि अलि शङ्कालु स्वभावको…
Posted on July 23, 2012 at 1:30pm5Comments 8 Likes
हवाइजहाज देख्दा त खासै केही लागेको…
“म तपाईँको फोटो खिचिदिन्छु नी ”
Posted on March 20, 2012 at 10:30am4Comments7Likes
“अब त उ यहाँ बाट जान्छे ?”
“पर... धनि मान्छेको घरमा अनि उ त बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढ्छे रे ।”
ती साना अनि कलिला बालिकाहरुको यस्ता कुराहरु सुनेपछि मेरो मन एक्कासी कता कता निमोठिएर आयो । ती एक अनाथ अनि टुहुरी बालिकाको मनमा आफ्नो साथीहरु सँग छुटिने पिडाको साथ साथै नयाँ अनि सुनौलो भबिष्यको सपनाले गुदगुदाएको पनि छ । उ अरु भन्दा अलि खुशी छे किनभने अब उसले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउने भएकी छे, मिठो मिठो खान पाउने भएकी छे र राम्रो राम्रो लुगा लाउन पाउने भएकी छे...। उनको मनमा…
आखिर कहिले सम्म ???
Posted on March 19, 2012 at 4:30pm0Comments2Likes
छोरीको राम्रो शिक्षा र उज्जवलको भविष्यको सपना बुन्दै आमा बाबुले आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ – धेरै नेपालीको सपना र सुविधाको सहरमा पठाउने बिचार गरे । काठमाडौँ स्थित चोभारमा बस्ने आफ्नै काकाको घरमा बसेर पढ्न सृजनाले पनि सहजै स्वीकारिन् । पढेर ठुलो भन्ने आफ्नो सपना साकार हुन्छ भने त्यसलाई कसले लत्याउन चाहन्छ र ?? यस्तै यस्तै आफ्नो पढाईले पनि निरन्तरता पाउन, घरमा आमाबाबालाई अलिकति भएपनि बोझ हल्का हुने र आफ्नो भबिष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर उनी रमाउँदै, अनेक सपनाहरु सङ्गाल्दै काठमाडौँ आफ्नो काकाकाकीको…
At 3:20pm on March 2, 2011, Equal Access said…